Landeservice Translation Shanghai, ibekwe kumbindi wesixeko, ligxininisa ukuba kuguqulwe amaxwebhu zoshishino kuzo zonke iilwimi eziphambili ehlabathini. Landeservice Translation Shanghai nkampani translation ngokupheleleyo yasekhaya yokuqala Shanghai. Njengenkampani ezaziwayo-kakuhle, siya zikwindawo efanelekileyo ukuba kunokwanelisa iimfuno translation kakhulu ezizodwa kakhulu ezintsonkothileyo. yequmrhu translation yethu rhoqo nabaxumi zokutolika ziquka emininzi-mveliso omkhulu umthetho jikelele, iinkampani Iinkonzo zobungcali kunye conglomerates zemveliso.
Office Landeservice Translation Shanghai
ofisi yethu Shanghai libekwe ku 1090 Shi Ji Da Dao Rd, Pudong, Shanghai, China, 200031. Kungenxa umgama lula ukuhamba kwezikhululo Shang Cheng Lu Metro (Line 9). abathengi bethu kakhulu wamkelekile ukuba utyelele i-ofisi yethu Shanghai ukuba bangathanda ukuxoxa iinguqulelo zabo okanye naluphi na umba iinkonzo zethu buqu.
Uninzi thethwano nabo benzelwa iinkonzo zethu lwenzeka nge email ([email protected]) kunye neenombolo (+86 21 5102 8095). Iikopi ezingamaphepha amaxwebhu entsusa kunye nezinto ezinxulumene ungakwazi khosi kunikelwa ngeposi okanye ngekhuriya.
Ukuba ufuna ingcaciso engaphezulu nceda undwendwele iwebsite yethu http://en.landeservice.cn
Iinkonzo zethu Ulwimi
Landeservice Translation Shanghai inika uluhlu olupheleleyo translation kunye nezinye iinkonzo zolwimi kunye processing uxwebhu. Thina zibanga wokuguqulela amaxwebhu anxulumene-ishishini ukudidi oluphezulu. Kwakhona Ukubonelela ngeenkonzo zokutolika Shanghai, ngokunjalo lonke China. izabelo zokutolika International zihlanganiswa ofisi zethu eLondon, eNew York, eParis kunye Luxembourg. Thina ukufumana umgangatho ophakamileyo wokuguqulela abathengi bethu ngamazwe silindele ngokulandela inkqubo yolawulo lomgangatho enzima. Kuba translation isabelo ngamnye, nabaphathi bethu iprojekthi onamava wabeka kunye neqela efanelekileyo abaguquleli, bajonga iimpazamo kunye nabahleli. Oku kuqinisekisa ukuba zonke bokuqonda yobugcisa kunye ezizodwa maxwebhu entsusa athe ziqondwa kakuhle kwaye iguqulelwe. izabelo Translation ezibandakanya IsiNgesi okanye ezinye iilwimi zaseYurophu nabo baxhamle fundo yethu ubuchule ku-ngendlu ikomkhulu lethu eLondon. Ngenxa yale nkqubo, iinguqulelo bethu ukufunda ngathi kakuhle HCWM amaxwebhu entsusa. Iinguqulelo nga abubungqina notarised ukuhlangabezana neemfuno zakho ngqo.